सचेत हुनुहोस् ! पोखरा– बागलुङ यात्रा जोखिमपूर्ण, जुनसुकै बेला पहिरो खस्न सक्ने - Gandak News
सचेत हुनुहोस् ! पोखरा– बागलुङ यात्रा जोखिमपूर्ण, जुनसुकै बेला पहिरो खस्न सक्ने
गण्डक न्यूज द्वारा २९ असार २०७६, आईतवार २२:३२ मा प्रकाशित 0
पोखरा । मनसुन शुरुभएपछि मध्यपहाडी लोकमार्गको पोखरा –बागलुङ खण्डको यात्रा जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने पोखरा –बागलुङ खण्डमा जुनसुकै बेला पनि पहिरो खस्नसक्ने भएकाले जोखिमपूर्ण बनेको हो ।
जुनसुकै बेला पनि माथिबाट पहिरो झर्ने सम्भावना भएकाले यात्रुलाई सचेत भएर यात्रा गर्न आह्वान गरिएको सडक स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको एपेक्स कन्ट्रक्सनका परियोजना प्रबन्धक काशीराज बोहराले बताए । निरन्तर पहिरो झर्ने र सफा गर्न समेत कतिपय अवस्थामा कठिन हुने भएकाले यात्रा गर्दा ध्यान दिन आग्रह गरिएको उनले बताए ।
एउटा स्काभेटर तयारी अवस्थामा राखेर पहिरो हटाउने काम भइरहेको बोहराले जानकारी दिए । पहिरो जाने स्थान नजिकबाट झोबाङ हुँदै वैकल्पिक सडक रहेको छ ।सडकको पर्वत खण्डमा डिमुवाको माहुरीभिर, आम्बोट र भ्याप्लेखोला नजिकको भिर, चुवा नजिकैका भिरमा पनि पहिरोको उच्च जोखिम छ ।
अन्तिम खेलमा बार्सिलोनाको शानदार जीत,…